Home // Download Center
MCF Download Center
IT Business Plan Contest 2015 (Entry Form)
Myanmar Unicode plugin for MS Excel
Excel တွင် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ရိုးရာအတိုင်း အက္ခရာစဉ် နိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်သည်။ Myanmar NLP team မှ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
Myanmar Unicode plugin for MS Word
Microsoft Word တွင် မြန်မာ ဘာသာဖြင့် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်သည်။ Myanmar NLP team မှ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
English-Myanmar translation software
This free software is developed and distributed by Myanmar Computer Federation, to translate text from English to Myanmar. (အင်္ဂလိပ် ဘာသာမှ မြန်မာ ဘာသာသို့ ချက်ချင်း ကွန်ပျူတာဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးသော ဆော့ဝဲ ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
Win fonts, ZawGyi One စသည့် အခြား စနစ်များနှင့် ရိုက်ထားသော မြန်မာ စာသားများကို ကမ္ဘာ့စံသုံး မြန်မာစာ format အဖြစ် တမဟုတ်ချင်း ာင်းပေးသည့် ဆော့ဝဲဖြစ်သည်။ Myanmar NLP team မှ ရေးသား ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ download ရယူ နိုင်ပါသည်။
Myanmar OpenOffice 3.1
menu အားလုံး လိုလိုကို မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုထားသော opensource office software (Word, Excel, PowerPoint ကဲ့သို့) တရားဝင် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သော software များ ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ download ရယူ နိုင်ပါသည်။
Myanmar-English Transliteration Utility
transliteration အသံထွက်အတိုင်း စာလုံး လိုက်ပေါင်းသော software ဖြစ်သည်။
Zawgyi1 Unicode Converter
ဇော်ဂျီ မှ ယူနီကုဒ်၊ ယူနီကုဒ် မှ ဇော်ဂျီ သို့ ကြိုက်သလို အပြန်အလှန် ကူးပြောင်းနိုင်သော 2-way online-converter
Download Keymagic installer
This installer includes Myanmar3 keyboard and Win/Zawgyi keyboar too.
Myanmar language resources (myanmarlanguage.org)
Myanmar Unicode page on Facebook
Myanmar2 ဖောင့်ဖြင့် ရေးသားထားသော စာများ၊ ဖိုင်များ ကို Myanmar3 ဖောင့်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုရာတွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ် နေသည်များကို Myanmar3 ဖောင့် format ပုံစံအတိုင်း မှန်ကန်စေရန် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ အမှန်ပြင်ပေးသော software converter ဖြစ်ပါသည်။
You are here: Home // Download Center